ဒုတိယ အိပ်မက် ရဲ့ မျက်ရည်စက် | PoemsCorner
ဒုတိယ အိပ်မက် ရဲ့ မျက်ရည်စက်
အဆ များစွာ သာ လို့ ပို
နင့်ကိုဆို ဘ၀အဆက်ဆက် အတွက်
အလိုက်တသိနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်တတ်တဲ့သူ ..အဖြစ်
အရာရာ အမှန်တရားတွေလို ငါ.လိုက်မှားတတ်တဲ့သူ…အဖြစ်
နင့် အနား ထာဝရ အသက်ရှု ၊ ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်
အသိစိတ်မဲ့ ခံစားချက် ရင်ခုန်သံများ
ဒုတိယရင်ခုန်သံ … ဒုတိယခံစားချက်
ဒုတိယရင်ဘတ်နေရာမှာ ငါ့ကို…ထား မချစ်ပါနဲ့
ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာ လွမ်းခွင့် ရပါစေ
ချန်..ထားခဲ့လိုက်ပါ။ (ပထမသူနဲ့..ပျော်ရွှင်စွာ နိုးထပါ)
In: ကဗျာ Posted By: အသဲကွဲမိုး Date: Dec 2, 2011
ဒုတိယ နှလုံးသား (night^ )
ဒုတိယ နိဗ္ဗာန်ဘုံ – စွမ်းသူရဇော်
Leave comment 25 Comments & 866 views
အင်း ကဗျာရေးထားတာကိုတော့ သဘောကျတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ ခံစားချက်ကိုတော့ သဘောမကျဘူး။ ကျွန်တော်က အတ္တသမား ဖြစ်နေလို့လည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုသာ ဒုတိယအနေနဲ့ ချစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘဝမှာ နှမလက်လျှော့နေလေတော့ ဆိုပြီး တာ့တာ ပြခဲ့မှာပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ကို ပထမနေရာမှာ ထားတာမလား။ တရားမျှတမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ခံစားချက်ကို ပြောပြတာပါ။ ကဗျာကို ဖျက်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကဗျာက ကဗျာကောင်းတပုဒ်ပါ။
By: ChIr0N at Dec 2, 2011
ဟုတ်..ကို ချီရွန်(ပုလဲ) မိုးကဗျာလေးကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ရှု ခံစား ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
By: အသဲကွဲမိုး at Dec 2, 2011
အချစ်ဆိုတာ “အ” လို့ချစ်တာလို့ပြောရင်လည်းခံရမှာပဲ..
ခံစားချက်နဲ့ ရေးတာဆိုရင်တော့ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ..
By: သက္ကရာဇ် at Dec 2, 2011
ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုရမှာ အသေချာပါပဲ
By:ူlynnthantkoko at Dec 2, 2011
ကျွန်တော် မြင်တာကို ပြောတာပါ
ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် ဝေဖန်ချင်ပါတယ် အကြံပေးချင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်လိပ်စာက [email protected] ပါ
မိုးရဲ့Profileကို အခုမှ ကြည့်မိတယ်
ကဗျာပေါင်း 117ပုဒ်ဆိုတော့ ကြိုဆိုရမယ်လို့ပြောခဲ့တာ မှားများသွားပြီလားဗျာ
ကဗျာက ရင်ဘတ်အစစ်နဲ့ ရေးတာဖြစ်ကြောင်း
By: terry at Dec 3, 2011
By: အသဲကွဲမိုး at Dec 3, 2011
ei lay ka dot,,,,
ah loh chit de pe pyaw pyaw,,,
chit loh ah de pe pyaw pyaw,,,
tone loh chit de pe pyaw pyaw,,,
be thu tway bar pyaw pyaw lone wa ga u ma sike bu,
thu hma thu pe,,1 yout de chit de,,thuapaw hmar tit sar shi me,,
kou ka thu ye2yout myout lar?3yout myout lar? be hna yout myout le ma ti chin bu,,,sate shoke de.
kou bet kaakaung sone tway pe thu ko pay ke de(bar hma pyan ya phoe ma hmaw lint htar bu)
myit tar so tar yaung pyan hat par de,(kou bet kaayoe tar sone tway pay htar tar)
bar phyit phyit pop koh late pyar kou lone yin p tar pe.
By: ei lay at Dec 4, 2011
pome kaayan kg tel….Arr Pay: twar tel naw…..Good tel….:)
By: Lwan Nge Lay at Dec 4, 2011
မမိုး..အခုမှပဲ တွေ့မိတယ်။အမ ကိုလည်းသတိရနေတယ်ဗျ။
By: poem.poem28 at Dec 4, 2011
By: nate thit(နေ့သစ်) at Dec 8, 2011
By: moehtetaung18 at Jan 15, 2012
ချန်..ထားခဲ့လိုက်ပါ။ (ပထမသူနဲ့..ပျော်ရွှင်စွာ နိုးထပါ)…
By: APhyu at Feb 14, 2012
အသဲကွဲမိုး ရေးတဲ့ကဗျာလေးတွေမှန်သမျှ .. စာသားတွေအရမ်းမိုက်တယ်
By: laynhyotshin at Oct 25, 2012
By: နိုင်စစ်သည် at Oct 25, 2012
A person who love u truely wont care what the position is.
No reason for true love.
By: ei lay at Oct 25, 2012
A person who love u truely will never let u go away what the situation is.
By: zawthetoo at Oct 26, 2012
ကဗျာလေးတွေတော်တော်များကိုကြိက်ပါတယ်.. ကဗျာရေးတဲ.သူတွေလဲကျန်းမာပါစေဒီထက်မကကဗျာများကိုလဲရေးပေးပါအုံးကျတော်ကတော.ကဗျာတွေသိပ်မရေးတတ်ဘူးဟိဟိ..သူများရေးတာတွေကိုပဲဖတ်ဖြစ်တာများတယ်တစ်ခါတစ်လေရေးကြည့် ချင်ပါတယ်..ကဗျာချစ်သူများစိတ်ချမ်းသာပါစေ…စိုင်းခွန်လတ်မန်းလေး
By: sai khun lat at Oct 26, 2012